Vhura maBorder eUS ane COVID bvunzo yekuuya: World Tourism Network & US Kufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Vhura maBorder eUS ane COVID bvunzo yekuuya: World Tourism Network & US Kufamba
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Maindasitiri mapoka anokurudzira kusimudza kurambidzwa parwendo rwekunze kuUnited States
Hapana zororo kuenda kuUSA panguva ino. Iyi ndiyo yaive mhinduro yeWhite House kuvashanyi vekuEurope avo vaitarisira kuenda kuzororo reVISIT USA.
United States haizosimudze chero zviripo zvekufamba zviripo "panguva ino" nekuda kwekunetseka pamusoro peiyo inopfuuridzirwa inopararira ye COVID-19 Delta uye kuwanda kwenhamba dzeUS coronavirus kesi, White House yakasimbisa neMuvhuro.
World Tourism Network uye US Travel iri kukurudzira kuvhurazve United States kuvashanyi vekunze, asi WTN inoda kuwedzera imwe dziviriro - kusvika kweCOVID zvakare kune vafambi vakazara.
Musiyano weDelta urikukonzera kuwanda kwekuratidzira kweiyo COVID-19 hutachiona kunyangwe ichibaiwa majekiseni kumativi ese eAtlantic.
Vhiki rapfuura Kufamba kweUS kwakasundidzira kusimudzwa kwemitemo yekufamba yeVafambi veEuropean.
Nhasi White House yapa mhinduro, US Travel yanga isingade kunzwa kuti: "Tapihwa patiri nhasi… nemusiyano weDelta, tichachengetedza zviripo zvekufamba panguva ino," mutauriri weWhite House, Jen Psaki akadaro neMuvhuro, achitsanangura kupararira kweiyo Delta musiyano muUnited States nekune dzimwe nyika. "Inotungamirwa nemusiyano weDelta, nyaya dziri kusimuka pano pamba, kunyanya kune avo vasina kubayiwa nhomba uye vanoita kunge vacharamba vachiwedzera mumavhiki anotevera."
US Travel Association Executive Mutevedzeri weMutungamiri wePublic Affairs uye Policy Tori Emerson Barnes akaburitsa chirevo chinotevera pamusoro pechisarudzo chehutungamiriri hweBiden kusimudzira zvirambidzo zvekufamba.
“Mhando dzakasiyana dzecovid dziri kunetsa, asi miganhu yakavharwa haina kutadzisa musiyano weDelta kupinda muUS apo majekiseni ari kuratidza kuti anogara nekusimba kuhutachiona. Ichi ndicho chikonzero indasitiri yekuAmerica yekufambisa iri mutsigiri wezwi revanhu vese vanowana mushonga - ndiyo nzira yechokwadi nekuchimbidzika kune zvakajairika kune wese munhu.
"Kunyange dzimwe nyika, dzakaita seCanada, UK, uye dzakawanda dzeEU, dzese dzakatora matanho ekugamuchira vafambi vakapinda muzhizha muzhizha uye kuvaka zvakare mabasa nehupfumi hwenzvimbo, United States inoramba yakavharwa kune chimwe chezvikamu zvakakosha zvehupfumi hwekufamba. -Iye mufambi wepasi rese anopinda.
“Tichifunga nezvehuwandu hwakawanda hwekubaiwa majekiseni pamativi ese eAtlantic, zvinokwanisika kutanga zvakanaka kugamuchira vaenzi vakabaiwa jekiseni kubva kumisika yakakosha iyi.
Dr. Peter Tarlow, wezvekufamba kwenyika uye wezvekuchengetedza nyanzvi ye safertourism.com
Dr. Peter Tarlow, co-sachigaro we Iyo World Tourism Network akati: "Tinobvumirana neU.S. Travel pakutsvaga nzira yakachengeteka yekuvhura miganhu yedu kune vashanyi. Tinokurudzira manejimendi eBiden kuti asangoda bvunzo kana humbowo hwejekiseni kana uchikwira ndege kuenda kuUnited States asi mumwe muedzo pakusvika uye usati wabvumidzwa kusiya nzvimbo yetsika yendege yeUS, kana chiteshi chekupinda. Mhedzisiro mhedzisiro mhedzisiro inowanzo kuwanikwa mukati memaminitsi gumi nemashanu, uye iyo US inogona kudzidza kubva kune dzimwe nyika, senge Israeri semuenzaniso. Tinonzwa kuti izvi zvakakoshawo kune vafambi vanobayiwa majekiseni kana vasiri majekiseni. ”
Juergen Steinmetz, sachigaro weHawaii-based World Tourism Network (WTN) akawedzera kuti: "Hawaii muenzaniso wakanaka wekushanya nenzvimbo dzine hutachiona hutsva kunyangwe hazvo paine hutachiona hweCOVID-19. Hawaii inongovhurika kune vafambi vekumba uye inosimbisa iyo yechokwadi mufananidzo wezvekutarisa kana uchiwedzera kuvhura nyika kune vashanyi vekunze zvakare. Hawaii iri kuda bvunzo yePCR kune vafambi vasina kubayiwa, asi hapana imwe bvunzo yekuuya kana vachengeti vashanyi. Kuedzwa kwePCT kwakanaka, asi bvunzo inokurumidza pakusvika kwevanhu vese inogona kuisa imwe vimbiso kumufananidzo. "
Dr. Peter Tarlow zvakare nyanzvi yekuchengetedza uye chengetedzo muUnited States uye akamboshanda pamapurojekiti mazhinji neUS State department munguva yakapfuura.
US Travel yakaratidza mune chirevo chayo.
"Tinokumbira neruremekedzo manejimendi eBiden kuti aongororezve chisarudzo chake munguva pfupi yapfuura uye vatange kuvhurazve mafambiro epasirese kune vanhu vakabayiwa nhomba, kutanga nemikoto yemhepo pakati peUS nenyika dzavaine majekiseni ekudzivirira."
Nekushanda nevane chekuita navo uye nevatashanyi nevatungamiriri vehurumende, iyo World Tourism Network yakabuda muKuvakazve Kwekukurukurirana Kwekufamba. WTN inotsvaga kugadzira nzira dzekuvandudza nekusanganisira nekukwirisa chikamu chekushanya uye kubatsira mabhizimusi madiki nepakati uye emabhizinesi ekushanya panguva dzese dzakanaka nedzinonetsa.
WTN inopa yakakosha yezvematongerwo enyika uye bhizinesi izwi kumabhizimusi madiki nepakati uye inopa kudzidziswa, kubvunza, uye mikana yekudzidzisa.